Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » St. Eustatius Breaking News » St. Eustatius Wuxuu Soo Dhaweynayaa Dalxiisayaasha Talaalka Buuxa
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • St. Eustatius Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Deganeyaasha aan la tallaalin, xubnaha qoyska, shaqaalaha ama dadka leh guri ku yaal Statia oo hore ugu jiray waddan halis badan ama waddan aad halis ugu ah ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa laakiin waa inay galaan karantiil muddo 10 maalmood ah markay soo galaan.
Dalxiisayaasha aan tallaalin weli ma booqan karaan Statia.
Saamaynta baaxadda leh ee COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Statia, Dawladda Hoose ma laha ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay sii furto jasiiradda.
Liiska halista aad u sareysa, halista sare, halista hoose iyo dalal aad u hooseeya ayaa si joogto ah loo cusbooneysiin doonaa.
Hay'adda Guud St. Eustatius wuxuu halkan ku xusuusinayaa bulshada in laga bilaabo Isniinta soo socota, 2 -da Ogosto, 2021 wajiga saddexaad ee Road Map -ku uu dhaqan -geli doono. Taas macnaheedu waa in booqdayaasha si buuxda loo tallaalay oo ay ku jiraan dalxiisayaashu ay booqan karaan Statia.
Soo -booqdayaasha ka socda waddamada khatarta sare leh waa inay u hoggaansamaan qawaaniin adag oo 5 maalmood ah markay yimaadaan oo ay ku jiraan xirashada maaskaro wejiga, ka fogaanshaha bulshada iyo ka -qaybgalka dhacdooyinka waaweyn ee abaabulan. Soo -booqdayaasha la tallaalay oo ka yimid dalal aad halis u ah waa la soo dhaweynayaa laakiin waa inay galaan karantiil (dhexe) muddo 5 maalmood ah markay soo galaan. Soo -booqdayaasha si buuxda loo tallaaley oo ka yimid waddamada halista ugu yar ma aha inay u hoggaansamaan tallaabooyinka qaarkood mana aha inay galaan karantiil.
Deganeyaasha aan la tallaalin, xubnaha qoyska, shaqaalaha ama dadka leh guri ku yaal Statia oo hore ugu jiray waddan halis badan ama waddan aad halis ugu ah ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa laakiin waa inay karantiil galaan 10 maalmood markay soo galaan. Dalxiisayaasha aan tallaalin weli ma booqan karaan Statia.
Liiska halista aad u sareysa, khatarta sare, halista hoose iyo dalal aad u hooseeya ayaa si joogto ah loo cusbooneysiin doonaa.
Furitaan dheeri ah macnaheedu waa inay jirto khatar sare oo ku lug leh maadaama booqdayaal badan oo ka socda (aad u) waddamo halis badan ay geli karaan Statia oo laga yaabo inay fayraska u keenaan jasiiradda.
Intaa waxaa dheer, kala duwanaanshaha Delta ee COVID-19 wuxuu kordhiyaa heerka halista maadaama kala duwanaanshahan uu yahay mid faafa. Si kastaba ha ahaatee, saamaynta baaxadda leh ee COVID-19 ku yeelatay dhaqaalaha Statia, iyo xaqiiqda ah in xirmooyinka taageerada bulshada ee dawladda Nederland aan la bixin doonin, Dawladda Hoose ma laha ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay sii furto jasiiradda.